Waxaan rajeyneynaa inaad aragto heerkayaga daahfurnaanta ee ku saabsan habka aan ufarinno maalgashiga waxtarka leh. Intaa waxaa dheer, waxaan ku siinaa jawaab-celin halkan ka mid ah su'aalaha inta badan la isweydiiyo.
Meesha laga bilaabo
Waxaan bilaabayaa inaan barto saameynta maal-gashiga iyo maalgelinta mas'uulka ka ah. Halkee ayaan bilaabi karaa?
Saamaynta saameynta qaybta internetka ee McKnight ayaa loogu talagalay dadka aasaasiga ah iyo umada. Waxaan bixinaa daahfurnaanta maalgashadayaasha hay'adaha ee baranaya. Haddii aad tahay maalgaliye shakhsi ah oo bilaabanaya, isku day tan khayraadka.
Meelaha mudnaanta leh
Maxay yihiin mudnaanahaaga mudnaanta leh ee saamaynta maalgelinta?
Waxaan si aad ah u daneyneynaa maalgashiga si weyn u yareyn kara wasakhowga kaarboonka iyo / ama u dhisi doona bulshooyinka loo wada dhan yahay oo loo dhan yahay ee Minnesota.
Miyaad maalgelisaa meel ka baxsan Minnesota?
Haa. Saameynteena maalgelinta waxay tixgelinayaan maalgashiyada ku yaal Maraykanka. Waqtigaan, si kastaba ha ahaatee, wax saameyn ah kuma sameyno caalamka marka laga reebo gaadiidka maalgelinta.
Codsiyada deeqda la xidhiidha saamaynta isdhexgalka
Waxaan raadinayaa deeq ah si aan u dhisno baaxadda saameynta maal-gashiga. Maxaan sameeyaa?
Machadka McKnight wuxuu abuuraa saameynta saameynta maalgelinta dhaqaalaheena. Ma haysanno miisaaniyad dejin si loo maalgaliyo cilmi-baarista, dhexdhexaadiyeyaasha, mashaariicda, ama dhacdooyinka saamaynta maal-gashiga.
Aqoonta cilmi baarista
Waxaan qabanayaa cilmi baaris. Miyaad buuxin doontaa sahankayga?
Dhammaan codsiyada cilmi-baarista waa inay tagaan Nate Wade, falanqaynta maalgashiga Waxaan isku dayeynaa inaan ka caawinno cilmi baarista marka la ogol yahay.
Waxaan ahay la taliye. Ma wareysan karaa qof ka socda McKnight?
Websaytka McKnight wuxuu bixiyaa heer aad u sarreeya oo dadwaynuhu soo bandhigo oo ku saabsan habkeena iyo miisaaniyadeena. Haddii booqasho buuxda aysan ka jawaabin su'aalahaaga, fadlan u soo dir email adiga oo leh danahaaga iyo su'aalahaaga gaarka ah Elizabeth McGeveran, Agaasimaha Barnaamijka Maalgashiga Impact.
Qoraalka Siyaasadda Maalgashiga
Saameyn maaha inaad maalgeliso qayb ka mid ah Qoraalka Siyaasadeed ee Maalgalinta?
Haa waa, waana mid la heli karo. Nidaamkayaga ku aaddan deegaanka, arrimaha bulshada, iyo maamulka (ESG) ayaa ku dhex jira Qoraalka Siyaasadda Maalgashiga. Lifaaqyada waxay bixiyaan faahfaahin dheeraad ah.
Maareeyaha Sanduuqa Waxqabadka
Anigu waxaan ahay maamulaha dhaqaalaha. Yaan la xiriirayaa maalgashiga suurtagalka ah?
Marka la eego xaddiga su'aalaha aan heleyno, waxaan u egnahay inaan la kulanno maamulaha maaliyadeed oo kaliya iyadoo ku saleysan wicitaan qabow. Machadka McKnight wuxuu la shaqeeyaa Imprint Capital, oo ah Goldman Sachs Management Asset, si loo horumariyo dhuumaheena maalgashiga mustaqbalka. Fadlan u soo dir codsiyadaada ku saabsan lacagaha suuqyada dadweynaha iyo fursadaha gaarka ah Goldman Sachs si toos ah.
Waxaan soo saarayaa hal-abuurka weyn ama tijaabinta app cusub. Miyaad maalgalin doontaa meheraddayda?
Sababtoo ah abuur iyo hore u maalgashadiisu aad ayay u adag tahay, waxaan ku tiirsanahay dhaqaalaha raasamaalka. Miisaaniyadda maalgashiga tooska ah, waxaan maalgalin ku sameynaa caasimadda koritaanka shirkadaha leh macaamiisha iyo dakhliga. Waxaan ka fogaanaynaa halista teknoolajiyada Waxaan u badneyn inaan la kulano ganacsade keliya oo ku saleysan wicitaan qabow.
Hantida Hantida ah ee Hantidhawrka
Waxaan kor u qaadayaa caasimadda si aan u dhisno xarun cusub oo warshadeed. Miyaad maalgalin doontaa meheraddayda?
Maya, waxaan iska ilaalinnaa in aan si toos ah u maalgelino hantida hantida badan ee raasumaalka ah.
Waxaan doonayaa inaan sugto maal-galinta barnaamijka suuqyada ee hoos ku xusan (PRI). Waa maxay shuruudahaaga?
McKnight wuxuu leeyahay qiyaasta PRI ugu yaraan $ 1 milyan. PRI waxaa inta badan loo wareejiyaa deynta ama damaanad qaadka, laakiin waxaan leenahay dabacsanaan si aan u sameyno PRI ama isticmaali xeelado kale. Waxaan tixgelineynaa PRI dhammaan qaybaha deeqda maalgelinta ee Aasaasiga ah, laakiin ma sameyno PRI-ga caalamiga ah. Inkastoo aan leenahay inaan samayno PRI ururada qaata deeqda McKnight, tani ma aha xeer adag oo dhaqso ah. Fadlan sahaminta mashaariicda jira ee jira ee hoose bogga faylalka si aad wax dheeraad ah uga ogaatid qaabkayaga.
Waa maxay ballan qaadka saafiga ah ee McKnight?
Isniinta, Oktoobar 18, 2021, McKnight Foundation ku dhawaaqay ballan si loo gaaro qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee eber ah dhammaan deeqdeeda $3 bilyan marka la gaaro 2050 ugu dambeyntii.
eber saafiga ah waa istaraatiijiyad dhamaystiran oo isla markaaba loo dhimo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee dhamaan faylalka maalgashiga - oo ay ku jiraan qaybta shidaalka -iyado sidoo kale samaynta maalgashi cusub si loo dhiso dhaqaale ka madax banaan kaarboon.
Akhriso kaayaga su'aalaha inta badan la is weydiiyo ku saabsan eber saafiga ah si aad wax badan uga barato.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku casuumo Elizabeth McGeveran inay ka hadasho munaasabaddeyda.
Codsiyada hadalka ee Elizabeth McGeveran waa in loo diraa shirkadeena maalgashiga Josh Rosamond.
Anigu waxaan ahay wariye wareysi, soo saaraha, ama qoraha iyo waxaan jeclaan lahaa inuu wareysto qof ka socda McKnight.
Fadlan la soo xiriir Dan Thiede, Sarkaalka sare ee isgaarsiinta McKnight, oo leh dhammaan codsiyada warbaahinta. Ku dar magaca xarunta warbaahineed, xagasha sheekada gaarka ah, sida ugu dhakhsaha badan ee aad ugu baahan tahay waraysi, iyo wixii faahfaahin ah ee kale ee khuseeya.